I-Dhamma energy: iyini, yenzani futhi inamaphi amaphrojekthi enawo | Green Renewables
Amandla elanga aya ngokuya akhuthazwa yizinkampani namaphrojekthi azama ukwenza la mandla abe into ethuthukisiwe. Enye yezinkampani ezibheja amandla elanga yi I-Dhamma energy. Iqembu le-Dhamma Energy liyathuthukisa, lakha futhi lisebenzise izitshalo zamandla elanga.
Kulesi sihloko sizokutshela ngomlando we-Dhamma energy, amaphrojekthi abaluleke kakhulu nokuthi asebenza kanjani.
2 Iphrojekthi ye-Dhamma energy
3 Isakhiwo nokuxhaswa ngezimali kwe-Dhamma energy
4 Ukusatshalaliswa kwe-hydrogen eSpain
5 I-Dhamma energy kanye nezakhiwo zayo
Ukusebenza kweDhamma Energy eFrance naseSpain kwatholwa ngo-Okthoba 2021 yi-Eni gas e luce, inkampani engaphansi kwe-Eni SpA engu-100%. I-Dhamma Energy njengamanje inesikhungo samandla elanga esingu-120 MWp eFrance.
I-Dhamma Energy yaqala ukusebenza eFrance naseSpain eminyakeni engaphezu kweshumi edlule, lapho yathuthukisa khona amaphrojekthi ayo okuqala elanga. Ngemva kwalokho, I-Dhamma Energy yandisa imisebenzi yayo eFrance, lapho yakha khona ipaki yayo yokuqala yelanga.
Ngo-2013, i-Dhamma Energy yavula inkampani engaphansi kwe-Mexico, eye yasungula isikhungo samandla elanga angama-470 MWp futhi njengamanje inephothifoliyo ye-2 GWp. Ngaleso sikhathi, leli qembu lisebenzela iphrojekthi yalo yokuqala ye-photovoltaic e-Afrika, ipaki yelanga ye-2 MWp eMauritius, eyavulwa ngo-2015.
Kuze kube manje, i-Dhamma Energy isiqedile ukuthuthukiswa kwe-650 MW yezitshalo zamandla e-photovoltaic, ezitholakala kakhulu eMexico, eFrance nase-Afrika. I-Dhamma Energy njengamanje inepayipi elingu-2 GWp elisebenzayo eMexico. Ithimba le-Dhamma Energy lakhiwe abaphathi bephrojekthi, onjiniyela kanye nochwepheshe bezobuchwepheshe emkhakheni we-photovoltaic.
Iphrojekthi ye-Dhamma energy
Phakathi neminyaka, ngokuhlangenwe nakho abakutholile, baye baba umholi ozimele ekuthuthukiseni izitshalo zamandla e-photovoltaic kanye nokukhiqizwa kwamandla elanga. Njengabathuthukisi, abakhi, opharetha nabatshalizimali bezitshalo ze-photovoltaic, bahlanganisa wonke umjikelezo wempilo wephrojekthi: kusukela ekufuneni umhlaba kuya ekunakekeleni nasekuphathweni kwepaki ye-photovoltaic.
Ithimba lihlanganisa zonke izigaba zokuthuthukiswa kwephrojekthi ye-solar PV, okuhlanganisa izifundo zokungenzeka, ukuhlola isimo sendawo, izifundo zemvelo, ukuhlolwa kwendawo, imiqondo yokufaka, ukuhlolwa kobuchwepheshe, ukuhlaziya inqubomgomo kanye nomthetho, ukuba nokwenzeka kwezezimali, ukusungulwa kokuthengwa kwamandla (i-PPA).
I-Dhamma Energy ibambisana nabahlinzeki abakhulu bamazwe ngamazwe (amamojula e-photovoltaic, ama-inverters, izinhlelo zokugcina). Omunye wemikhakha yomsebenzi we-Dhamma Energy ukuphatha ukwakhiwa kwamaphrojekthi we-photovoltaic. I-Dhamma Energy iphinde ihambisane nabalingani bayo bokutshalwa kwezimali kuze kufike isigaba sokuqala sephrojekthi.
Sebenza nochwepheshe nabafaki abanolwazi olunzulu kulo mkhakha. I-Dhamma Energy ithuthukise futhi yakha ngempumelelo amaphrojekthi elanga aphansi ophahleni lwendlu naphansi asebenzayo njengamanje.
Isakhiwo nokuxhaswa ngezimali kwe-Dhamma energy
Esinye sezigaba ezibalulekile zephrojekthi ukuhleleka nokuxhasa ngezimali. Kule nkampani yamandla elanga, banolwazi, ulwazi kanye namakhono okuvikela uxhaso lwezimali kanye nokuvikela uxhaso oluyimpumelelo lwezitshalo zikagesi welanga ezimaphakathi nezinkulu ngaphansi kwemithetho ehlukene. Ulwazi lwakhe luhlanganisa ukuxhaswa kwezimali ngokulingana kanye nezivumelwano zezikweletu zesikhathi eside namabhange ezentengiselwano nezinhlangano zamazwe ngamazwe.
Babambe iqhaza kuwo wonke umjikelezo wempilo wephrojekthi futhi baqondise ukuqaliswa kwe izitshalo zamandla elanga futhi uma sezifinyelele esigabeni sokudayisa, zithuthukisa futhi zisebenzise la maphrojekthi. Ukukhiqizwa kwamandla elanga kuyingxenye yebhizinisi.
Njengamanje banezinhlobonhlobo zezitshalo zamandla elanga ezisebenzayo, okuhlanganisa izitshalo ezibekwe phansi ezimaphakathi nezinkulu, kanye nezitshalo eziphezu kophahla, ezitholakala ikakhulukazi eFrance.
Ukusatshalaliswa kwe-hydrogen eSpain
Ukusatshalaliswa kwe-hydrogen eluhlaza kumaphrojekthi aseYurophu kuzoqala eSpain ngokubamba iqhaza kwe-Enagás, Naturgy and Dhamma Energy. Iphrojekthi ye-HyDeal Ambition ihlose ukuthuthukisa uchungechunge lokusabalalisa lwaseYurophu lwe-hydrogen eluhlaza ngamanani ancintisanayo eSpain, lapho kuzoqala khona ukuphehlwa kukagesi ngonyaka ozayo, okuhloswe ukuthi kube ngamamegawathi ayi-10 ngonyaka.
Umsuka walo mthombo wamandla avuselelekayo ukukhiqizwa kwe-hydrogen eluhlaza ngokusebenzisa i-solar electrolysis, lapho amanani okuncintisana angafinyelelwa ngohlelo, oluzothatha izinyathelo zalo zokuqala ngo-2022 futhi luhlose ukufinyelela ku-85 GW. yomthamo welanga kanye ne-67 GW amandla elanga. ama-watts okukhiqiza amandla e-electrolytic ngo-2030.
Lokhu kumelela amathani ayizigidi ezingu-3,6 e-hydrogen eluhlaza ngonyaka, okulingana nezinyanga ezimbili zokusetshenziswa kukawoyela eSpain, okuzosatshalaliswa ngokugcinwa kwegesi yemvelo kanye namanethiwekhi okuthutha ezinkampani ezibamba iqhaza kulolu hlelo. Intengo kukhasimende ilinganiselwa ku-1,5 EUR/kg, eqhathaniswa nenani lamanje lamafutha ezinto ezimbiwa phansi kodwa, ngokubuyisela, ayikhiqizi ukungcola.
Ngaphandle kwezinkampani ezintathu zaseSpain i-Enegás, i-Naturgy ne-Dhamma Energy, ezinye izinkampani ezinkulu ezivela kwezinye izingxenye ze-Europe nazo zibambe iqhaza, njenge-Falck Renewables (Italy), i-Gazel Energie (eFrance), i-GTTGaz (eFrance), i-HDF Energie (eFrance) , Hydrogen de France , McPhy Energy (France), OGE (Germany), Qair (France), Snam (Italy), Teréga (France), Vinci Construction (France)… kufikela kuzinkampani ezingama-30 ezibambe iqhaza. Lezi yizinkampani ezivela emikhakheni eyahlukene njengokuthuthukiswa kwelanga, ukwakhiwa kwemishini kagesi kagesi, ubunjiniyela, kanye nezimali zengqalasizinda kanye nabeluleki.
I-Dhamma energy kanye nezakhiwo zayo
Kulo nyaka wezi-2021 ngenyanga kaMeyi, i-Dhamma energy icele ukugunyazwa kokufakwa kukagesi kwesitshalo samandla kagesi aphezulu esibizwa nge-"Cerrillares I photovoltaic solar plant". Ukuthuthukiswa kwephrojekthi, ezoba phakathi komasipala baseJumilla naseYecla, imele utshalomali olulinganiselwa ku-30 ​​million euros, lapho ama-euro ayizigidi ezingu-28 ahambisana nokufakwa kukagesi we-voltage ephansi yesitshalo selanga se-photovoltaic phansi, kulandelwa ngokuvundlile ku-eksisi eyodwa.
Ngakolunye uhlangothi, ama-euro ayizigidi ezingu-1 azotshalwa kolayini bokudlulisela bangaphandle ukuze kukhishwe amandla akhiqizwayo (amamitha angu-12.617 ubude) kanye nama-euro angu-742.000 eziteshini ezincane. Ipaki yelanga izothatha isamba esingamahektha angama-95 futhi, uma isisebenza, izophehla ugesi ongu-97,5 GWh ngonyaka. Lo mkhiqizo ulingana nokusetshenziswa kwemizi ebalelwa ku-30.000.
Ngithemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana ne-Dhamma energy namaphrojekthi ayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Amandla avuselelekayo » Photovoltaic Solar Amandla » amandla e-dharma